The Year of Charlotte Mannya Maxeke – The Ulwazi Programme
Unyaka nonyaka uhulumeni wethula isiqubulo esisuke sizoba isiqubulo sezinhlaka zikahulumeni. Leziqubulo zihambisana nezinhlelo zakhe uhulumeni kanti ke leziqubulo zihambisana nokukhunjulwa kwamaqhawe abambe iqhaza emlandweni waseNingizimu Afrika. Kulonyaka isiqubulo esithi “The year of Charlotte Mannya Maxeke: Growing youth employment for an inclusive and transformed society”. Lokhu kuqondene kahle ngoba entsheni abantu abafana naye umama uCharlotte bangabantu abayisibuko, intsha ebukela kuso futhi iphinde ifise ukuba namava afana nawabo empilweni. Esikhathini la imfundo iyikho konke khona futhi kuyiyona ewumongo wempilo ephilwa namhlanje, kubalulekile ukuthi intsha ifunde izifundo zamakhono ukuze izithuthukise. Inkinga ke ukuthi intsha yanamhlanje ayisebenzi futhi ivalelwa nangaphandle ezintweni ezibalulekile.
Ziningi izingqinamba intsha yaseNingizimu Afrika ebhekene nazo okubalwa kuzo ukuvalelwa ngaphandle uma kuthathwa izinqumo ezithinta yona intsha nezithuthukisa yona futhi. Kube yindaba yawo umsebenzi kanye nokubiza kwemfundo yamazinga aphakeme eyenza kube nzima ukuthi intsha ikwazi ukuzithuthukisa. Umbuzo ke ukuthi kanti ikuphi intsha okumele ikwenze ukuze ithole amathuba agodlwe yilaba esithi basilwela, belwa nohulumeni wobandlululo? Lenyanga inyanga yentsha, yona lentsha ecindezelwe uhulumeni futhi enganakwa izidingo zayo.
Uma kukhulunywa ngokuthi “Growing youth employment for an inclusive and transformed society” akumele ngabe kukhulunywa ngokuthi kuqalwa phansi kucatshangelwe ukuthi intsha ingasizakala kanjani futhi ithuthukiseke kanjani kepha kumele ngabe kunikwa yona ithuba izihlahlele yona indlela. Kuyo lenyanga yentsha, sekube nemashi khona eThekwini iholwa uhla lwabafundi yaseNyuvesi yakwaZulu bemashela edolobheni laseThekwini begqoke imiyezane yeziqu zabo zemfundo beyokhala kuMkhandlu wedolobha bekhala ngamathuba omsebenzi. Kanti ke naseNyusesi yaseZululand nabo bahlele ukuthi bamashele khona esikhungweni semfundo bekhala ngokungaqashwa. Kahle kahle nje akukho intsha engathi yeneme ngakho, ngoba abaneziqu bahleli nazo emakhaya abasebenzi. Bengasebenzi nje uma bezama nokuvula amabhizinisi abafakelwa isandla ukuthi basizakale. Kubalulekile ukuthi intsha nayo inikwe amathuba futhi ifakwe ezintweni ezizothuthukisa izwe nayo ibe nesandla.